Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.3.2 mifanandrify
Mifanitsy tsara tarehy mamorona fampitahana amin'ny fanetezam lasa tranga.
Fair fampitahana afaka ny ho tonga avy na randomized fanandramana na fanandramana ara-boajanahary. Kanefa, maro ireo toe-javatra izay tsy afaka mihazakazaka tsara indrindra fanandramana sy ny natiora dia tsy nanome voajanahary fanandramana. Amin'ny toe-javatra izany, ny fomba tsara indrindra mba hamoronana fampitahana ara-drariny no mifanandrify. Amin'ny mifandraika, ny mpikaroka mijery amin'ny alalan'ny fanandramana tsy mba hamoronana tahirin-kevitra tsiroaroa ny olona izay mitovy afa-tsy ny iray ihany no nahazo ny fitsaboana ary ny iray tsy manana. Ao amin'ny dingan'ny mifandraika, mpikaroka ireo raha ny marina koa ny fanetezam; izany hoe, ho fanariana tranga izay tsy misy mazava fampitahana. Noho izany, izany fomba ho marina kokoa hoe mifandraika-sy-fandrantsanana, nefa aho tsy hiala amin'ny nentin-drazana hoe: mifandraika.
Ny ohatra tsara ny herin 'ny paikady mitovy amin'ny fanandramana goavana tsy angon-drakitra loharanom-baovao avy amin'ny fikarohana momba ny fitondran-tena ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa aminy Liran Einav (2015) . Einav sy ny mpiara-miasa aminy dia liana amin'ny Auctions maka toerana ao amin'ny eBay, sy mitantara ny asany, aho hifantoka amin'ny lafiny iray manokana: ny vokatry ny lavanty manomboka amin'ny lavanty vidin'ny vokatra, toy ny fivarotana vidiny na ny mety ho ny fivarotana.
Ny tena fomba tsotra loatra ny mamaly ny fanontaniana momba ny vokatry ny vidin'ny manomboka amin'ny vidiny amidy dia ny fotsiny kajy ny farany vidiny ho an'ny hafa Auctions amin'ny vidin'ny fanombohana. Izany fomba ho tsara fotsiny raha te-mialoha ny fivarotana vidin'ny iray nomena zavatra izay efa nataony tamin'ny eBay amin'ny nomena manomboka vidiny. Fa, raha ny fanontaniana dia hoe inona no vokatry ny vidiny eo amin'ny tsena manomboka vokatra io fomba io dia tsy mety satria tsy mifototra amin'ny ara-drariny fampitahana; ny Auctions amin'ny vidin'ny manomboka ambany Mety ho tena samy hafa amin'ny Auctions amin'ny vidin'ny manomboka ambony (ohatra, dia mety ho ny samy hafa karazana ny entana, na ahitana ny mpivarotra isan-karazany).
Raha toa ianao ka efa miahiahy mikasika ny fanaovana tsara tarehy fampitahana, dia mety dinganina ny tsotra loatra fomba ary hevero nihazakazaka saha fanandramana izay mety mivarotra iray manokana item-hoe, ny Golf Club-amin'ny raikitra napetraka ny lavanty masontsivana-hoe, free fandefasana, lavanty misokatra ny tapa-bolana, sns, fa amin'ny tsapaka nametraka manomboka vidin-javatra. Amin'ny alalan'ny fampitahana ny vokatry ny tsena vokatra, ity andrana an-tsaha dia atero ho tena mazava fandrefesana ny vokatry ny manomboka vidin'ny amidy Price. Nefa, izany fandrefesana dia iray ihany no mihatra amin'ny vokatra manokana sy teo ny lavanty masontsivana. Ny vokatra mety ho samy hafa, ohatra, fa samy hafa karazana vokatra. Raha tsy misy kevitra mafy, dia sarotra ny extrapolate avy izany fanandramana tokana ny feno andrana isan-karazany azo atao, izay mety efa nihazakazaka. Ankoatra izany, saha ampy fanandramana no lafo vidy fa ho infeasible ny mihazakazaka ampy ny azy hanarona ny fikirana manontolo toerana ny vokatra sy ny lavanty karazana.
Mifanohitra amin 'ireo fomba tsotra loatra sy ny andrana fomba, Einav sy mpiara-miasa aminy fahatelo maka fomba fijery: mifandraika. Ny tena hevi-petsin'i ny tetika dia ny mahita zavatra mitovy amin'ny saha fanandramana izay efa nitranga ny eBay. Ohatra, Sary 2.6 mampiseho ny sasany amin'ireo 31 lisitra ho mitovy Golf Club-a Taylormade burner 09 Driver-rehefa nivarotra ny mitovy seller- "budgetgolfer". Na izany aza, ireo efa somary Listings samy hafa toetra. Iraika ambin'ny folo amin'izy ireo hanatitra ny mpamily ho raikitra vidin'ny $ 124,99, raha ny hafa 20 dia Auctions amin'ny hafa daty farany. Koa, ny Listings Tsy mitovy saram fandefasana entana, na $ 7,99 na $ 9.99. Amin'ny teny hafa, dia toy ny hoe "budgetgolfer" dia nihazakazaka fanandramana ny mpikaroka.
Ny lisitra ny Taylormade burner 09 Driver ho nivarotra ny "budgetgolfer" dia iray ohatra iray mifanentana napetraka ny Listings, izay ny tena zavatra iray ihany no efa nivarotra ny marina mpivarotra ihany, fa isaky ny amin'ny toetra hafa kely. Ao anatin'ny hazo goavam-be ny eBay misy ara-bakiteny ana hetsiny ny mifanentana momba an-tapitrisany maro karazana Listings. Noho izany, fa tsy mampitaha ny farany vidiny ho an'ny rehetra ao anatin'ny nomena Auctions manomboka vidiny, Einav sy ny mpiara-miasa ao anatin'ny mifanentana mampitaha milentika. Mba manambatra vokatra avy amin'ny fampitahana ireo ao anatin'ny ana hetsiny mifanentana milentika, Einav sy ny mpiara-miasa indray maneho ny fanombohana sy ny vidiny farany vidin'ny eo amin'ny ny boky sarobidy ny zavatra tsirairay (ohatra, ny eo ho eo fivarotana vidiny). Ohatra, raha ny Taylormade burner 09 Driver manana boky hasarobidin'ny $ 100 (mifototra amin'ny ny varotra), dia ny fanombohana vidin'ny $ 10 dia ho naneho toy ny 0,1 sady farany vidin'ny $ 120 dia ho naneho toy 1.2.
Sary 2.6: Ny ohatra iray mifanentana napetraka. Izany no mitovy marina Golf Club (ny Taylormade burner 09 Driver) ho nivarotra ny marina ny olona iray ihany ( "budgetgolfer"), fa ny sasany amin'ireo nanao varotra ireo fepetra samihafa (ohatra, hafa hanombohana vidiny). Figure nalaina tao amin'ny Einav et al. (2015) .
Tadidio fa Einav sy ny mpiara-miasa aminy dia liana tamin'ny vokatry ny fanombohan'ny amin'ny lavanty vidin'ny vokatra. Voalohany, mampiasa ny fihemoran'ny Linear dia tombanana fa vidin-javatra ambony manomboka mihena ny mety ho ny fivarotana, ary ambony ny vidin'ny manomboka mampitombo ny farany vidin'ny fivarotana, fepetra amin'ny fivarotana mitranga. By ny tenany, ireo vinavina-izay nahatratra rehetra vokatra sy mihevitra ny Linear fifandraisana eo hanombohana vidiny sy ny vokatra farany-tsy izay rehetra mahaliana. Nefa, Einav sy mpiara-miasa ihany koa ny mampiasa ny goavana haben'ny ny angona mba Tombanan'ny isan-karazany kolaka kokoa hitany. Voalohany, Einav sy ny mpiara-miasa nanao vinavina ireo misaraka ny zavatra ny vidin-javatra samy hafa sy tsy mampiasa ny fihemoran'ny Linear. Hitan'izy ireo fa raha ny fifandraisana misy eo amin'ny voalohany sy ny mety ho vidin'ny fivarotana iray no Linear, ny fifandraisana eo hanombohana vidiny sy ny fivarotana vidiny dia mazava tsara tsy Linear (Sary 2.7). Indrindra indrindra, satria nanomboka vidin-javatra eo amin'ny 0,05 sy 0,85, ny fanombohana vidiny firy manana fiantraikany eo amin'ny vidin'ny fivarotana, ny fitadiavana izay vita very tao amin'ny fanadihadiana izay efa noheveriny ho Linear fifandraisana.
Figure 2.7: fifandraisana eo amin'ny lavanty nanomboka vidin'ny sy ny mety ho ny fivarotana (sisa tontonana) sy ny fivarotana Price (ankavanana tontonana). Misy mitovitovy ny Linear fifandraisana eo nanomboka vidin'ny sy ny mety ho amidy, fa misy tsy Linear fifandraisana misy eo nanomboka vidiny sy ny fivarotana vola vidiny; Hanombohana vidin-javatra eo amin'ny 0,05 sy 0,85, ny fanombohana vidiny firy manana fiantraikany eo amin'ny vidin'ny fivarotana. Amin'ireo tranga roa ireo, ny fifandraisana ankapobeny dia tsy miankina ny zavatra sarobidy. Ireo kisary hiteraka Fig 4a sy 4b Einav et al. (2015) .
Faharoa, fa tsy salan'isa rehetra zavatra, Einav sy mpiara-miasa ihany koa ny mampiasa ny goavana ambaratonga ny angona mba hanombanana ny fiantraikan'ny manomboka vidin'ny 23 samihafa sokajy ny zavatra (ohatra, biby kojakoja, fitaovana elektronika, sy ny fanatanjahan-tena fahatsiarovana) (Sary 2.8). Ireo vinavina mampiseho fa ny zavatra miavaka kokoa, toy ny fahatsiarovana-nanomboka vidin'ny manana kely kokoa vokany eo amin'ny mety ho ny fivarotana sy ny vokany lehibe kokoa eo amin'ny farany hamidy vidiny. Ankoatra izany, fa zavatra commodified kokoa-toy ny DVDs sy lahatsary-ny nanomboka vidin'ny manana saika tsy misy fiantraikany eo amin'ny farany vidiny. Amin'ny teny hafa, eo ho eo izay Mitambatra vokatra avy amin'ny sokajy 23 samihafa ny zavatra manafina fampahalalana manan-danja momba ny fahasamihafana misy eo amin'ireo zavatra.
Figure 2,8: Vokatra nampiseho ny vinavinan'ny avy amin'ny sokajy tsirairay isam-batan'olona; ny mafy orina teboka ao amin'ny Tombanana ho an'ny sokajy rehetra miara-pooled (Einav et al. 2015, Table 11) . Ireo vinavina mampiseho fa ny zavatra miavaka kokoa, toy ny fahatsiarovana-ny nanomboka vidin'ny manana vokany kely kokoa eo amin'ny mety ho ny fivarotana (x-mpiray) ary vokany lehibe kokoa eo amin'ny fivarotana farany vidin'ny (Y-mpiray).
Na dia tsy tena liana amin'ny Auctions ao amin'ny eBay, tsy maintsy mankafy ny fomba sy endrika isa 2.7 2.8 atero ho karena fahatakarana ny eBay noho ny fihemoran'ny Linear tsotra vinavina izay mihevitra Linear fifandraisana sy mitambatra sokajy samihafa maro ny zavatra. Kolaka kokoa ireo vinavina mampiseho ny herin'ny goavana mitovy amin'ny angona; ireo vinavina Mety ho azo tsy goavana andrana maro an-tsaha, izay mety ho efa prohibitively lafo vidy.
Mazava ho azy, tsy tokony hanana matoky ny vokatry ny fianarana mifanandrify manokana noho ny nety ao amin'ny vokatry ny fanandramana mitovy. Rehefa fanombanana ny vokatra avy amin'ny mifandraika fianarana, dia misy zava-dehibe roa olana. Voalohany, dia tsy maintsy mahatsiaro fa afaka ihany no antoka ara-drariny fampitahana amin'ny zavatra izay nampiasaina ho mifandraika. Ao ny tena vokatra, Einav sy ny mpiara-miasa no marina mitovy amin'ny toetra efatra: mpivarotra ID isany avy, zavatra sokajy zavatra anaram-boninahitra, ary ny Subtitle. Raha toa ny entana dia samihafa amin'ny fomba izay tsy ampiasaina amin'ny mifandraika, izay afaka hamorona ny tsy rariny fampitahana. Ohatra, raha toa ka "budgetgolfer" nampidininy vidin-javatra ho an'ny Taylormade burner 09 Driver ao amin'ny ririnina (rehefa Golf fikambanana tsy dia malaza), dia mety hiseho fa ambany manomboka vidin'ny mitondra ny hampidina farany vidin-javatra, raha ny marina izany dia ho artifact ny vanim-potoana fiovaovana ao amin'ny fangatahana. Amin'ny ankapobeny, ny tsara indrindra io olana io fomba toa miezaka maro karazana mifandraika. , Ohatra, sy ny mpiara-miasa Einav mamerina ny fanadihadiana izay ahitana milentika mifanentana amin'ny zavatra amidy ao anatin'ny taona iray, ao anatin'ny iray volana, ary contemporaneously. Ny fanaovana ny fotoana varavarankely mataho- tra mihena ny isan'ny mifanentana milentika, fa mampihena olana momba ny vanim-potoana fiovana. Soa ihany, dia mahita fa ny valiny dia niova noho ireo fiovana eo amin'ny fepetra mifanandrify. Ao amin'ny mifandraika boky sy gazety, io karazana ahiahy dia matetika miseho amin'ny resaka observables sy unobservables, fa ny manan-danja tokoa fa ny hevitra dia mpikaroka ireo ihany no mamorona fampitahana ara-drariny eo amin'ny endri-javatra mifandraika nampiasaina tao.
Ny faharoa, rehefa mandika lehibe momba mifanandrify vokatra dia ny hoe izy ireo ihany no mihatra amin'ny mifanentana angona; tsy mihatra amin'ny toe-javatra izay tsy azo mifanentana. Ohatra, ny mametra ny fikarohana ny zavatra maro izay nanana lisitra Einav sy mpiara-miasa aminy dia mifantoka amin'ny matihanina sy ny semi-matihanina mpivarotra. Noho izany, rehefa nandika ireo dia tsy maintsy mahatsiaro fampitahana isika fa izy ireo ihany no mihatra io subset ny eBay.
Mifanandrify dia mahery vaika noho ny paikady ara-drariny mahita fampitahana amin'ny datasets lehibe. Maro ny mpahay siansa ara-tsosialy, mifandraika mahatsapa toy ny faharoa-tsara indrindra ny fanandramana, fa izany dia finoana izay tokony nohavaozina, kely. Mifanandrify amin'ny angon-drakitra goavana mety ho tsara kokoa noho ny vitsy ny andrana an-tsaha, rehefa: 1) heterogeneity amin'ny vokatry dia zava-dehibe, ary 2) misy observables ho mifandraika tsara. Table 2.4 hafa dia manome ohatra ny fomba azo ampiasaina mitovy amin'ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao.
Table 2.4: Ohatra ny fampianarana izay mampiasa mifandraika mba mahita fampitahana ara-drariny ao anatin'ny soritra nomerika.
Big angona loharano
Vokatry ny tifitra tamin'ny polisy herisetra Atsaharo-ary-frisk rakitsoratra Legewie (2016)
Effect Septambra 11, 2001 ao amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-monina -pifidianana firaketana an-tsoratra sy ny fanomezana rakitsoratra Hersh (2013)
Social areti-mifindra Fifandraisana sy ny fananganan-jaza vokatra rakitra Aral, Muchnik, and Sundararajan (2009)
Ho famaranana, tsotra loatra ny estimating causal fomba vokany avy amin'ny tahirin-kevitra tsy fanandramana dia mampidi-doza. Na izany aza, noho ny fanaovana tetikady causal vinavina mandry nanaraka ny fitohi- avy mahery ho malemy indrindra, sy ny mpikaroka dia afaka hahita fampitahana ara-drariny ao anatin'ny tsy fanandramana angona. Ny fitomboan'ny foana-on, angon-drakitra rafitra lehibe kokoa ny fahafahantsika mampiasa amin'ny fomba mahomby misy fomba roa: voajanahary fanandramana sy mifandraika.